Ukwakha nge-ecobricks | Ecobricks.org
Kunezinqubo ezinhlanu eziyinhloko zokwakha ibhodlela…
Milstein ifenisha yefenisha
Dieleman amamojula we-lego
Ukwakha ibhodlela lomhlaba
Pura Vida Atlan indlela
Ngomcabango omncane, i-Ecobricks ingasetshenziswa cishe noma yini.
I-Ecobricks ingaxhunyiwe isebenzisa ama-band bands, abicah, i-cob, nesimente *. I-Ecobricks ingasetshenziselwa ukwakha ifenisha, izivande, izakhiwo nokuningi. Ama-Ecobricks asetshenziswa ngezindlela ezehlukene emhlabeni jikelele. Kuleli khasi, sihlanganise isifinyezo sezinhlelo zokusebenza ezidumile kakhulu ze-Ecobricks. Siphinde sakha i-Vision Ecobrick Construction Guide ukukusiza ukuthi uqalise. Phakathi naleso sikhathi, uzothola ukubukeza okufushane kwendlela ngayinye yokwakha, izinzuzo zayo nokuqapha, ngezansi.
1. Milstein Modules (I-Lego evulekile)
Uhlelo olulula, olusheshayo, futhi mhlawumbe uhlelo lokusebenza oluhle kunazo zonke lwe-ecobrick, ukwenza amamojula ase-Milstein. Nge-MMs ungakha amabhentshi, itafula, izihlalo nokuningi. Konke okudingayo ngu-12 Ecobricks ukuqala! Sithole ukuthi i-silicone sealant isebenza kangcono ukuqoqa amamojula. I-Ecobrick Milstein Modules ingabe isetshenziselwa ukuthunyelwa kwamakilasi, amakhonsathi, imihlangano kanye nokunye okumele kube khona izindawo ezingezansi. Zingafakwa enye ngaphezulu kwesinye ukuze zengeze izinga elilodwa lokuphakama okuma. Zingafakwa futhi zigcinwe ngokuzenzekelayo ukuze zilondoloze isikhala.
Izinzuzo: Konke okudingayo kuyi-Ecobricks embalwa ukuqala! Kulula kakhulu. Jabulela.
I-Cons: Ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela. Imisebe ye-UV ekhanyisa ilanga izosihlisa futhi iphele ama-Ecobricks akho.
Funda kabanzi mayelana nokwenza amamojula nge-Ecobricks
2. Dieleman Modules ( I-Lego ebonakalayo)
Ngakho lokhu kuhle kakhulu- I-Ecobricks ingenza amabhlogo e-LEGO-afane. I-Dieleman Modules, noma ama-DM okwesikhashana, iyindlela yokuvula amabhodlela zibe izitini ezinamathemikhali ezingafakwa ngokuzenzekelayo. Ama-Ecobricks ayishumi nesithupha ahlanganiswe ndawonye ukwenza i-module eyodwa ye-DM. Ama-DM axhumana ngokufanayo njenge-Legos. Bafaka omunye komunye futhi bakwenze ukuba wenze izindonga, imibhoshongo namakholomu, okusheshayo futhi kulula ngaphandle kweglue noma udoti. Ama-DM angahle ahlukaniswe kalula.
Izinzuzo: Kuyinto emangalisa ngezinkundla zokudlala zangaphakathi nezakhiwo zokwakha amakhonsathi noma amakhosi ngamaminithi. Ungathathwa futhi ugcinwe ngokushesha nje!
I-Cons: Ukusetshenziswa kwangaphakathi kuphela. I-Ecobricks iyadalulwa futhi ngaleyo ndlela ifenisha ayinakusetshenziswa ngaphandle- imisebe ye-UV izokwenyusa futhi iguqule i-ecobricks yakho. Ukungatholakali kwamaphrojekthi wokwakha wesikhathi eside.
Funda kabanzi mayelana Ecobrick Dieleman Modules
3. Ukwakha ibhodlela lomhlaba
Indlela ehlala kunazo zonke futhi elula kunazo zonke yokwakha nge-ecobricks isebenzisa amasu we-Bottle Bottle Building. Eyaziwa ngokuthi i-cob, i-adobe, i-wattle-and-daub, neminye imigomo eminingi emhlabeni jikelele ibhekisela kumasu asendulo asebenzisa ubumba bendawo, isihlabathi kanye nomshini wokwenza udoti onamandla, oqinile, omuhle futhi otholile . Isakhiwo seBhola seMhlaba silungile ekwakheni izikhala zegadi ezilula, izindawo zokudlala kanye nezindonga.
Ukwakhiwa komhlaba kwasetshenziswa okhokho bethu ukwakha izindlu nezakhiwo eziye zaqhubeka iminyaka eminingi. Kulula futhi mahhala ukwenza, futhi kuhilela izingane kanye nabantu abadala ekwakheni.
Amasu ezakhiwo zebhulabhu emhlabeni angakwazi ukumboza ngokuphelele ama-Ecobricks, ngokuwafaka emathuneni ekwakheni. Lokhu kubenza bavikeleke ekukhanyeni kwe-UV nakwezinye izinhlobo zokulimala. Ngemuva kweminyaka eyi-10, engu-20 noma engu-100, lapho isakhiwo sakho siphela (njengoba konke ekugcineni kuyenzeka) abazukulu bakho bangakwazi ukuqeda i-ecobricks emgqeni bese bekulungele ukwenza isicelo sabo esilandelayo.
Izinzuzo: Inombolo yethu eyodwa yokuklama isakhiwo! Le ndlela inamandla, ukuzamazama komhlaba kunamandla, kuvumela izindonga nemiklamo egobile, ivumela i-ecobricks ukuthi iphinde isetshenziswe ekupheleni kokwakhiwa, futhi ixhomeke kuzinto ezingu-100% eziphilayo, ezenziwe ngaphakathi endaweni ezibiza ngaphandle.
U-cons: Kungaphandle kwesikhangiso sokwakhiwa kwebhizinisi: Ibhange lakho ngeke likunike imali yokubolekwa kwempahla, izinkampani zomshuwalense ngeke zimboze, futhi izandla zakho nezinyawo zakho zingcolile.
Funda kabanzi mayelana nokwakha nge-ecobricks nomhlaba
Abakwa-Ecobrickers eNingizimu Afrika bavele benendlela yokwakha ama unit modular nge-Ecobricks. I-innovative ye-Johannesburg nomklami we-ecobricker, u-Ian Domisse, lawa amamojula alula nje afuna ishidi leplywood ukuze libabambe ndawonye.
Izinzuzo: Kuhle kakhulu ngezinhlaka zangaphakathi, kumakhonsathi noma kumakhosi ngamaminithi. Kungathathwa ngaphandle futhi kugcinwe ngokushesha.
I-Cons: Ayikwazi ukucaciswa ngokuqondile ezakhiweni kodwa ingafakwa futhi ifihliwe ngempahla yokugibela.
5. Pura Vida Atitlan indlela yokwakha
Inhlanganisela yokwakhiwa kwekhonti kanye ne-boram isakhiwo sekhonkrithi kanye ne-ecobricks lakhiwe yi-Pura Vida Atitlan Ecobrick ukunyakaza eGuatemala. Unomqulu we-PDF wamahhala ochaza iSistema Constructiva Pura Vida (iSpanishi). Intambo yenkukhu isetshenziselwa imishayo emibili yokukhonta ukuze kuvunyelwe ukukhanya okuqondile kwe-ecobricks. Uma isikhala sodonga sesigcwele i-ecobricks, ucingo lubekwe phezu kwesimiso. Indlela yokwakha ihlolwe futhi ivunywe yi-Designers Without Borders, i-NorskForm (Isikhungo seNorway for Design and Architecture), ne-INDIS (i-Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad Rafael Landívar). I-HugItForward isebenzisa le ndlela yokwakha izikole ezixhaswa yi-ecotourism yokuzithandela.
Izinzuzo: Indlela enhle yokufaka okuningi kwama-Ecobricks ukusebenzisa isakhiwo somphakathi. Indlela ye-hybrid phakathi kokwakhiwa kwendabuko kanye ne-Ecobricks. I-Ecobricks ingabuyekezwa kabusha lapho ukwakhiwa sekuphela.
U-cons: Isebenzisa amakhemikhali, ama-steels, nezinto ezingezona zendawo. Imiphumela ezakhiweni zesikwele. Kudinga imali ngaphandle.
Vakashela le Pura Vida Atitlan isayithi
Imibono engaphezulu ...
Ukusebenzisa i-ecobricks yokuzivocavoca umzimba okugcwele mahhala. Bheka i-Ecobricks Fit manual. Kusukela emaqenjini e-baseball kuya ezikebheni, isibhakabhaka singumkhawulo kulokho ongasebenzisa i-Ecobricks for! I-Ecobricks ingasetshenziselwa ukuthola ukulungele, imidlalo nokuningi. Uyazi ukuthi i-Ecobricks ihamba kahle ngempela? Asikwazi ukulinda ukubona izikebhe zokuqala ze-Ecobrick neziqhingi. Uke wabona noma waqala izinhlelo zokusebenza eziwusizo? Sicela wabelane nathi, noma usize ithimba lethu lihlakulele leli khasi ngokuqhubekayo. Yabelana ngezithombe zakho kuwebhu nge-tag ye-hash #ecobricks. Thumela imibono yakho nezithombe kusigaba samazwana ngezansi.
*Inothi ebalulekile kukhonkolo
Seluleka ekusebenziseni i-ecobricks ngekhonkri njengodaka oluxhunyiwe. Ukuzikhandla kuzobamba ngokuqinile ukuhlangana ndawonye njengezindonga. Kodwa-ke, izindonga ezinjalo azikwazi ukuza ngaphandle kokukhwabanisa kanzima ezifaka i-ecobricks (phawula lokhu akusilo iqiniso ngePura Vida Atitlan, njengoba i-ecobricks ingabanjwanga ngokukhonkolo). Kubalulekile ukucabanga ngokuphila okulandelayo kwe-ecobricks nokuphela noma izakhiwo zethu. Bheka i-Cradle eya ku-Cradle eklrick design.
I-Ecobricks yisisombululo esijulile epulasitiki. Ama-Ecobricks nazo zonke izinhlelo zokusebenza kule sayithi ziyisisekelo esizukulwaneni esizukulwaneni.